Wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyada ay maanta cayaaraha ka qoreen - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyada ay maanta cayaaraha ka qoreen
Wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyada ay maanta cayaaraha ka qoreen
Manchester United ayaa laga yaabaa inay magacaabaan Jose Mourinho ka hor kulanka horyaalka ay garoonkooda ku wajahayaan Arsenal 28 February. Waxaa qoray (Sun)
Tababaraha hadda Old Trafford Louis van Gaal ayaa muddo gaaban inuu looga buriyo koxda wax cabsi ah aan ka qabin Sida uu shaaciyay (Sun)
fursadaha saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus Paul Pogba,oo 22 jir ah, ayaa wadahadalo la builaabi kara Manchester City ka dib markii Barcelona ay isaga hartay saxiixiisa Sida uu qoray (Daily Mirror)
Wakiilka Pogba, Mino Raiola ayaa beeniyay warar sheegayay in ciyaaryahanka uu qalbigiisa jacelyahay Camp Nou. Sida lagu bahiyay (Daily Express)
Tababaraha kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa sheegay in uu ka dhaadhiciyay siaga madaxda kooxda in la keeno 31-jirka khadka dhexe ee Jarmalka Bastian Schweinsteiger xagaagii lasoo dhaafay.Sida uu leeyahay (Website Manchester United)
David Moyes ayaa uga digay tababaraha Manchester United Van Gaal inuu waayo Champions League tasoo uu ku shegay mid aan la aqbali doonin Waxaa yiri (Sky Sports)
Kabtanka Chelsea John Terry ayaa doonaya inuu ciyaaro kulanka Champions League ee Paris St-Germain Arbacada, inkastoo dhaawac uu kasoo gaaray kulankii 5-1 kaga badiyeen Newcastle Sabtidii Waxaa qoray (Sun)
Weeraryahanka kooxda West Brom Saido Berahino,oo 22 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu wajaho xiriirka kubada cagta ka dib markii uu si qaldan ula dhaqmay Everton xiddigeeda James McCarthy kulankii Baggies ‘1-0 kaga badisay Goodison Park Everton. Sidaasi waxaa qoray (Daily Mirror)
Newcastle oo laga yaabo inay eryaan tababare Steve McClaren sababo la xirira milkiilaha Mike Ashley oo aan dooneyn inuu sii joogo kooxda Sida uu qoray. (Spor Report)
Daaficii hore ee Liverpool Jamie Carragher ayaa sheegay in Aston Villa ay tahay kooxda ugu xun Premier League ee uu abid arko. Waxaa daabacay manata (Sky Sports)
Xherdan Shaqiri ayaa marka la barbar dhigay saaxiibkiisa kooxda Stoke Giannelli Imbula, oo 23 jir ah, ciyaaryahankii hore ee France Patrick Vieira. Sdia uu qoray (Daily Telegraph)
Previous articleDowladda Britain”Ciidamadda Soomaaliya waxaan ugu deeqnay $4.3 milyan
Next articleCourtois oo kooxdiisa uga digay halista weeraryahanka kooxda PSG ee Zlatan